မဗဒေါရဲ့ ဗဒေါလမျး: Haeundae Tsunami (K-Movie)
Thanks for sharing. Korean films not widely available here. Are they good?
အဟိ နမူနာဆိုပြီး ကြည့်လိုက်တာ နောက်ဆုံး ၄ ခန်း ပြီးသွာံးပြီ အလုပ်မပြီးတော့ဘူးဗျ
ဇာတ်လမ်းကိုတော့ ကြည့်ဖူးပြီးသား အစပိုင်းမှာ အရမ်း အေးတိအေးစက်နဲ့ နောက်ပိုင်းကျမှ ပိုကြည့်လို့ကောင်းလာတယ် ဇာတ်လမ်းကောင်းတစ်ပုဒ်ပါပဲ
11/13/2009 11:36 AM
My friends told me that "My Girlfriend is an agent" is alsoagood movie. I haven't watched yet. :D
Yes.. but the poster is not that attractive to me.
my girlfriend is an agent is funny movie and i like it
အားနေတာနဲ့ ကိုးဒီးယားက စဆုံးထိုင်ကြည့်သွားပါကြောင်း။
လီမင်ကီးသေသွားတာတော့ တရားနဲ့ပဲ ဖြေပါတယ်။
ဟေ့ ဗေဒါမ ကျေူးဇူး ကြည့်လိုက်အုန်းမယ်။ စတာနော့်